एकाएक भाइरल भयो यो तस्बिर ! सरकारी सवारीको दुरुपयोग कहिलेसम्म ?
एक फोटोले शुक्रबार देखि सामाजिक संजाल चलाउने नेपालीहरुको माझमा निकै चर्चा कमाएको छ । दृश्य हेर्दा काठमाडौ कोटेश्वर देखि जडिबुटी बिच तिरको देखिन्छ । सरकारी नम्बरप्लेट रहेको बाईक नं. प्रदेश ३, ००१ ब. १४१२ रहेको छ ।
पछिल्लो चरण सरकारी सवारी साधनहरुको निजि प्रयोजनमा व्यापक दुरुपयोग भैरहेको खबरहरु आईरहँदा अर्को प्रतिनिधि मुलक तस्वीरको रुपमा यो फोटोलाई लिन सकिन्छ ।
यो तस्वीरको मोटरसाइकल कुनै सरकारी निकायको हो । जसमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सानका साथ कतै डेटिङ जानको लागि हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ । जसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा पछिल्लो समय जनताको करको सदुपयोग कसरी हुँदै छ भनेंर ?
केही मिनेट भित्रै यो फोटो यति धेरै सामाजिक संजाल चलाउनेहरु बिच पुग्यो कि यो हावाको रुपमा फैलियो । धेरैले यो सवारीको दुरुपयोग गर्नेलाई पहिचान गरि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले टिकटक अनि फेसबुक ट्रोलहरु बनाईरहेका छन् ।
साँच्चै यो फोटो सत्य हो भनें कारबाही होला त ?